Ugaas Xasan “Xildhibaanada reer Hiiraan meel aanan ahayn Hiiraan laga qori maayo, Afduubna ma yeelayno” | Baydhabo Online
Ugaas Xasan “Xildhibaanada reer Hiiraan meel aanan ahayn Hiiraan laga qori maayo, Afduubna ma yeelayno”
Odayaasha Dhaqanka Gobolka Hiiraan ayaa ka soo horjeestay hadalkii ka soo yeeray Guddiga Doorashooyinka dadban ee dalka, kaasi oo ahaa in Xildhibaanada Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe lagu soo Dooranaayo Magaalada Muqdisho.
Kulan ay Magaalada Baledweyne ku yeesheen Odayaasha Dhaqanka Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe, ayaa waxa ay si cad ugu sheegeen inaysan marnaba aqbaleyn in Muqdisho lagu soo doorto Xildhibaanada Gobolka Hiiraan ka imaanaya.
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ah Ugaaska Beesha Xawaadle ayaa sheegay inaysan marnaba qaadaneyn in qaab afduub ah lagu soo xulo Xildhibaanada reer Hiiraan.
Waxa uu kaga digay Guddiga Doorashooyinka Dadban ee dalka inay ka fekeraan tallaabooyinka ay qaadayaan iyo waxa ka dhalan kara.
“Waxaan ku celinaynaa mar kale iyo mar labaad iyo mar Saddexaad, Xildhibaanada reer Hiiraan Hiiraan meel aan ahayn laga qori maayo, Afduubna ma yeelayno, nimanka Duubabka ee la yiri 16-duub ayaa joogtay Somali waa istaqaanaa, War 16-ka Duub ee shalay shiray ee la sheegaayo meeqaa sax ah meeqaa been ah, Guddiga Doorashooyinka waxaa laga rabaa Talaabada ay qaadayaan inay sax tahay, laakiin 16-Oday oo suuqa laga soo aruuriyay in la dhaho waa Duubabkii Hiiraan.” Ayuu yiri Ugaas Xasan Ugaas Khaliif
Guddiga Doorashooyinka Dadban ayaa shalay Muqdisho kula shiray Odayaal dhaqan oo la sheegay inay ka soo jeedaan Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe, kuwaasi oo ay isla garteen in Muqdisho lagu soo doorto Xildhibaanada ka imaanaya Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe.
Caqabado hor leh ayaa soo baxaya oo ku aadan Doorashooyinka la filaayo in bilaha soo socda ay ka dhacaan gudaha Somaliya.